Shiinaha Tayada Shiinaha qiimaha Shiinaha MV855 Mashiinka Xarunta Soosaarka iyo Warshadda | BiGa
Xawaaraha sare ee xariijinta mashiinka toosan wuxuu qaataa nidaamyada kontoroolka ee dibada laga keeno sida Mitsubishi iyo Fanuc iyo qalabkeeda iyo mootooyinka ay ku taageerayaan si loo xaqiijiyo isku xidhka saddexda dhidib ama dhidibka badan. Waxay ku habboon tahay qaabdhismeedyo isku dhafan, habab badan, shuruudaha saxda ah ee sarreeya, iyo rakibaado badan Kaliya xakameynta iyo hagaajinta ayaa dhameystiri kara howlaha qaybaha laga shaqeynayo. Xarunta mashiinka ayaa ka baaraandegi karta armaajooyinka, dusha sare ee qalloocan, qaybo qaabaysan, taargooyin, gacmo gashi, iyo qaybaha saxanka, waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa aerospace, gawaarida gawaarida, aaladda, dharka warshadaha fudud, qalabka elektarooniga ah, iyo soo saarista mashiinnada.
Model Cutub MV 855
Cabbirka miiska mm (inji) 1000 × 500 (40 × 20)
T - cabbirka cabbirka (tirada sool x fogaanta widthx) mm (inji) 5 × 18 × 110 (0.2 × 0.7 × 4.4)
Xamuulka ugu badan Kg (lbs) 500 (1102.3)
Safarka X-dhidibka mm (inji) 800 (32)
Y - safarka dhidibka mm (inji) 500 (20)
Z - safarka dhidibka mm (inji) 550 (22)
Fogaanta min sanka miiq ilaa miiska mm (inji) 130-680 (5.2-27.2)
Fogaanta laga bilaabo xarunta dunmiiqa illaa dusha tiirarka mm (inji) 525 (21)
Taabashada dunmiiqa nooca BT40
Xawaaraha dunmiiqa rpm 10000/12000/15000
Wadid nooca Belt-tvpe / Si toos ah isugu xidhan / Directlv isku xidhan
Goynta heerka quudinta m / min (inch / min) 10 (393.7)
Xawaaraha (X / Y / Z) faasaska m / min (inch / min) 48/48/48
(X / Y / Z) xawaaraha xawaaraha ku socda m / min (inch / min) 1889.8 / 1889.8 / 1889.8
Nidaamka beddelaadda qalabka otomaatiga ah
Nooca Qalabka nooca BT40
Awoodda qalabka dhigay Gacanta 24T
Dhexroor qalab m (inji) 80 (3.1)
Dhererka qalabka ugu badan m (inji) 300 (11.8)
Miisaanka ugu badan ee qalabka kg (lbs) 7 (15.4)
Qalab beddelka qalabka sak 3
Mashiinka wadida dunmiiqa
Hawlgal fidsan / 30 daqiiqo lagu qiimeeyay (kw / hp) MITSUBISH
Howlsocodsiinta gawaarida gawaarida X, Y, Z (kw / hp) 2.0 / 2.0 / 3.0
Meesha mashiinka iyo culeyska
Meesha sagxadda mm (inji) 3400 × 2200 × 2800
Miisaanka kg (lbs) 5000 (11023.1)
Jarmal FAG, Japanese NSK saxan sax, Taiwan Intime ama Shanghai Yin tayo sare leh boolal kubada. Habka horay u fidinta waxaa loo isticmaalaa in lagu rakibo kubbadda, taas oo hagaajinaysa qalafsanaanta qaybaha gudbinta iyo baabi'inta dheereynta kubbadda kubbadda iyadoo ay ugu wacan tahay walwalka kuleylka inta lagu jiro heerkulka kor u kaca kubbadda inta lagu jiro hawlgalka.
Saddexda faasas waxay qaataan saxnaan sare, xawaare sare, iyo xamuul sare oo biraha isdabajoogga ah. Dhajiyeyaasha waxaa loogu talagalay moodello dhaadheer iyo kuwa waaweyn si loo hubiyo saxnaanta joogtada ah ee firfircoon, xasilloonida saxda ah, iyo nolosha adeegga. Saddexda faasas dhammaantood waxay kordhiyaan jihada tareenka hagista si ay u ilaaliso firfircoonaan wanaagsan iyo mid sax ah inta lagu jiro goynta. Dhidibka Z wuxuu qaatay naqshad aan lahayn tikniko weyn iyo matoor awood sare leh, taas oo hagaajinaysa waxqabadka jawaab celinta farsamada ee dhidibka Z;
Wareegga saliidda saliidda waxay qaadataa naqshad dhisme ah, iyo hagaha tareenka iyo kubbadda kuleylka waxay qaataan nidaam saliid dheellitiran oo otomaatig ah, kaas oo si joogto ah iyo tiro ahaan ugu duri kara saliid qayb kasta oo saliidaynaysa si loo hubiyo in labis isku mid ah oo dusha sare ah, oo si wax ku ool ah u yareeya iska caabinta khilaafaadka iyo hagaajinta saxnaanta dhaqdhaqaaqa Hubso nolosha adeegga tareenka hagaha iyo fur kubbada.
Ilaalinta qalabka mashiinka
Qalabka mashiinka ayaa si buuxda loogu lifaaqay si loo hubiyo badbaadada shaqsiyadeed ee shaqaalaha inta hawshu socoto, iyo qaboojiyaha iyo feylka lagu xareeyo inta hawshu socoto si nabadgelyo leh oo dhammaystiran ayaa loo soo kabsaday si loo hubiyo in goob shaqo oo nadiif ah oo hagaagsan. Tareenka hagaha mashiinka mashiinka wuxuu qaataa Taiwan daboolka birta telescopic-da ee birta ah, oo leh astaamaha waxqabadka ilaalinta wanaagsan iyo nolosha muddada dheer. Waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa faylasha birta ah iyo qaboojiyaha inay soo galaan qalabka mashiinka waxayna dhaawici karaan tareenka hagaha iyo fur. Sanduuqa kontoroolka korantada wuxuu qaataa naqshad dhammaystiran oo xiran, iyo kuleylka kuleylka wuxuu sameeyaa kala-baxa kuleylka, isagoo hubinaya nadiifinta sanduuqa korantada iyo nolosha adeegga qaybaha korantada.
Hore: Halbeegga farsamada ee mashiinka xiirashada Hydraulic 6x3200MM oo leh E21
Xiga: VMC Taxanaha CNC Milling mashiinka saddex raad adag
5 Mashiinka axdi qarameedka CNC
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Tooska ah
Xarunta Makiinada Qodista Cnc
Mashiinka Mashiinka Weyn ee Tooska ah
Mini Center CNC Milling Mashiinka
Tayada Taiwan qiimaha Shiinaha SVP Taxanaha Vertica ...
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka,